သောကြာသားသမီးများအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် အသေးစိတ်ဟောစတမ်း.. - Achawlaymyar
သောကြာသားသမီးများအတွက် အသက်အပိုင်းအခြားလိုက် အသေးစိတ်ဟောစတမ်း..
May 17, 2021 by Achawlaymyar
အသက် ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ နှစ်များ၏
ပထမ(၄)လအတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ လိုက်နာရန် နှင့် ပြုလုပ်ရန်ယတြာများ
ရတနာပုံဆိုက်တဲ့ကိန်းဖြစ်ပါတယ် …။ ရတနာတွေကို သွားပြီးသယ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး …။ အဲလိုသွားသယ်ရင် ပင်ပန်းတယ် …။ သယ်
စရာမလိုဘူး …. ရတနာတွေက ကိုယ့်ဆီကိုရောက်လာတဲ့ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် …။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုြးေ
ပာင်းလဲ မြင့်တက်မယ် …။ စီးပွားတက်မယ် …။ .
ကိုယ်ကြိုးစားလို့ ကိုယ်တော်လို့ စီးပွားတက်ပြီး လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ … ကံကြောင့် အကူအညီကောင်း ၊ အဆက်အ
သွယ်ကောင်း ၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေကြောင့် စီးပွားတက်တဲ့ ကိန်းဖြစ်ပါတယ် …။
ရည်ရွယ်ချက်ရှိသမျှရဲရဲလုပ်သင့်ပါတယ် …။ စီးပွားကို အင်နဲ့အားနဲ့ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်
ကြာသပတေးနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ပညာကိုအသုံးချရသောအလုပ် ၊ ပညာနှင့်ပက်သက်သောအလုပ် ၊ ဆရာအလုပ် ၊ ပွဲစားအလုပ် ၊ေ
မြ ၊ ဖုန်း ၊ မုန့် ၊ ပဲ ၊ ပြောင်း ၊ ဖယောင်း ၊ မိတ္တူ ၊ ဗီနိုင်း စသည့် ပ ဖ ဘ ဗ မ နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ
အင်္ဂါနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဆန် ၊ ဆီ ၊ ဆေး ၊ ဆား ၊ စပါး ၊ စိန် ၊ စစ်ဖက်ရေးရာ ၊ စားသောက်ကုန် ၊ စားသောက်ဆိုင် ၊ စက်ချုပ် ၊ စိုက်
ပျိုးရေး ၊ စကားပြောရသောအလုပ် ၊ စာပေ ၊ ဆံပင် ၊ စာရေးကိရိယာ ၊ စာရင်းကိုင် စသည့် စ ဆ ဈ ဇ ည နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသ
တနင်္လာနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ငွေ ၊ ခြံ ၊ ကား ၊ ကျောက် ၊ ကုန်သည် ၊ ကွန်ပြူတာ ၊ ကင်မရာ ၊ ကွမ်းသီး ကွမ်းယာပစ္စည်း ၊ ကုန်ခြောက် ၊
ကုန်စုံ ၊ ကြက်ဥ ၊ ကြက်သား ၊ ကြက်မွေးမြူရေး ၊ ငါးပိ ၊ ငါးခြောက် ၊ ငါးမွေးမြူရေး စသည့် က ခ ဂ ဃ င နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်
စတင်ရန် ၊ တိုးချဲ့ရန် ၊ လုပ်ကိုင်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သောအချိန်ကာလဖြစ်သည်။
အထူးပြုလုပ်ရန်ယတြာ – သောကြာနေ့ညဝတ်အိပ်ထားတဲ့ လုံချည်ဟောင်းတစ်ထည် နောက် နေ့မနက်စောစောမှာ မြေကြီးနဲ့ ထိအောင်
စွန့်ပါ။ အကြောင်းကိစ္စ ရှိရှိ မရှိရှိ မဖြစ်မနေကိုပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကံမကောင်းဘူးထင်ရင် ၊ အကြောင်းကိစရှိရင် ထပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် …။
အထူးရှောင်ရန် …. ထန်းလျက်၊ဝက်သား၊နာရေး ရှောင်ပါ။လူကိုတော့ မထိခိုက်ပါဘူး။ လာဘ်ပိတ်တာ၊ စီးပွားအတက် နှေးတာတွေ ကြုံရ
တတ်လို့ပါ။ နာရေးကို မဖြစ်မနေ သွားရမယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်လာတာနဲ့ တရော် ကင်ပွန်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပစ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ အိမ်ရှေ့ဝန်းကျင်မှာ လမ်းပြင်တာ၊ လမ်းဖောက် တာမျိုးလုပ်ရင်လည်း ကိုယ့်ကိုခိုက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီနိမိတ်မျိုြး
ကုံတာနဲ့ အခြား တစ်နေရာကို အနည်းဆုံးတစ်ရက် သွားအိပ်ပါလေ။
အဘက်ဘက်က အခြေအနေကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့သမျှ အသီးအပွင့်တွေကို ခံစားရမယ့်အချိန်မျိုးပါပဲ။ အစစရာရာ
မျှော်လင့်မထားတဲ့ အဆင့်အတန်းကို ရောက်ရှိအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ် …။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်မှာ စီးပွားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု လုပ်ဖြစ်ေ
အာင်လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ သိသိသာသာကြီးကိုပဲ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
အဖိုးတန်စက်ပစ္စည်း ၊ စိန် ၊ အဖိုးတန်စာအုပ်များလည်း ဝင်တတ်ပါတယ် …။ လုပ်ငန်းစီးပွား စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်း တိုးတက်လိမ့်မယ်
…။ ကျေးဇူးရှင်တွေ မိဘတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ် …။
စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပြည့်စုံမယ့် အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် …။ မိတ်ဆွေကောင်း၊ ဆရာကောင်းတွေလည်း တွေ့မယ်။ ပညာကောင်း တွေလည်း
ရတတ်တယ်။ ပြည်တွင်းပြည့်ပ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာလည်း အင်မတန် အားရကျေနပ်စရာ အခြေအနေတွေ ကြုံလာနိုင်ပါ
စပ်တူလုပ်ငန်းတွေလည်း အောင်မြင်မယ်။ ဘုရားဖူးခရီး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးတွေလည်း အောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးအ
ကျိုးပေးတဲ့ကာလလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ရှည် ကွဲကွာနေတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆရာ သမားတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆ
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်း အောင်မြင်မယ်။ အမွေ ကိစ္စ၊ မြေကိစ္စတွေမှာ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အဖိုးတန် စက်ပစ္စည်းေ
တွ ဝင်လာမယ်။ ဆိုင်ခန်း၊ တယ်လီဖုန်း . . . စတာတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
ရွှေ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေမယ်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုပြီးဖြစ်ခု ပျက်နေမယ်။
အဝတ်အထည်၊ထီး၊ဖိနပ်တွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုး သားချင်းအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ များတတ်တယ်။ အောက်လ
က်ငယ်သားကိစ္စ ခေါင်းခံဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာအတွက် ပူပင်သောက ရောက်ရတတ်ပါတယ်။
မဖြစ်စလောက်နဲ့ အမှုအခင်းလိုမျိုး ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာ တော့ မရှိပါဘူး…။ အပူလောင်တာ၊ သူခိုး ခိုးခံရတာတွေလည်း ကြုံ
ရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ ရာထူး လစာ တွေလည်း တိုးလိမ့်မယ်…။
ဆုံးရှုံးမလို ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေ ငွေ ပစ္စည်း အခွင့်အရေးတွေလည်း ပြန်ဝင်လိမ့်မယ် …။ ပစ္စည်းသစ်တွေ၊ အသုံးအဆောင် အဝတ်အသစ်တွေ
လည်း ဝင်လာလိမ့်မယ်…။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေတဲ့ မိတ်ဟောင်း ဆွေဟောင်းတွေ နဲ့ ပြန်ဆုံရလိမ့်မယ် …။
ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေထဲက အမှုအခင်းကြုံတတ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ရုံးတွေ၊ ဂါတ်တွေ ရောက်ရတတ်ပါတယ်။ လူရင်းထဲက နာရေးဖြ
ငွေရေးကြေးရေး – ကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ အပြင် အဘက်ဘက်ကနေ တရွှတ်ရွှတ် ဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ ငွေတွေ
ကလည်း ဝင်လာမှာ တသောသောပါပဲ…။ အလှူအတန်းကြီးတွေ လည်း လုပ်ရတတ်ပါတယ်။
ထီထိုးရန် – ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ဝင်လာရင် အင်မတန်နိမိတ်ကောင်းပါတယ်။ ဝင်တာနဲ့ ထီထိုးေ
စလိုပါတယ်။ (၃)အစ (၅)အဆုံး၊ (၅)အစ (၂)အဆုံး၊ (၃)အစ (၇)အဆုံး ဂဏန်းတွေ ထိုးသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး – ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မရှိလှပါဘူး။ လေထိုးလေ အောင့်၊ နှလုံးအားနည်း၊ဒူး၊နာ စတာတွေတော့ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး – အဆင်မပြေမှုများတတ်ပါတယ် ။ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ အမြင်မကြည်ဖြစ်တတ်ပါ တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား
သားသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီး စိတ်သဘော ကွဲလွဲရတတ်ပါတယ်။
အချစ်ရေး – အကောင်းဘက်ကို အလေး သာနေပါတယ်။ မတင်မကျ အခြေအနေတွေ ကြုံနိုင်ပေမဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
မင်္ဂလာကိစ္စ စီစဉ်ရတတ်တဲ့ အခါမျိုးပါပဲ။ လွတ်လပ်ပြီး အရွယ်ရောက်သူဆိုရင်တော့ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ရုတ်တရက် အိမ်ထောင်ကျတ
စနေနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေကိုတော့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ စနေသားသမီး၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကြောင့် စိတ်ညစ် ရတတ်ကြောင်း သ
ကံကောင်းစေတဲ့အရောင် – အကျိုး ပေးတဲ့၊ ကံတက် စေတဲ့၊ အဆင်ပြေ အောင်မြင် စေတဲ့ အရောင် တွေ ကတော့ … အဝါရောင်၊ အ
ညိုရောင်၊ ဖြူနီ ကြား အရောင်၊ အဖြုရောင် တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းမြတ်မာလာ – လှူတာ၊ ပန်တာ၊ ပန်းအိုး ထိုးတာ၊ ဆောင်တာ အတွက် ဆိုရင်တော့ မေမြို့၊ ပိတောက်၊ စံပယ်၊ ဇော်စိမ်း ပန်းတွေဖြစ်ပါ
နေ့ကောင်းရက်သာ – လုပ်ငန်းသစ်စတာ၊ တိုးချဲ့တာ … အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ စကားပြောမယ်၊ အလုပ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ကြာသပတေး၊
အကျိုးပေးနေ့သား – လုပ်ငန်းစပ်တူလုပ်မယ် ဆိုရင် … ကြာသပတေး၊ အင်္ဂါ သားသမီးတွေနဲ့တွဲပြီး လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ အကြံအစည်
များအောင်မြင်ရန် ကံကောင်းရန် ယတြာများ –
နှင်းဆီ (၃)ပွင့်ကို ခြေထောက်နဲ့နင်းပြီး ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ စံပယ်ပန်းအနည်းငယ်ထည့် ခေါင်းလောင်းချိုးပစ်ပါ ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မဆိုလုပ်
မနက်စောစော အိမ်ဘုရားမှာ ပန်းအဝါ(၅)ပွင့် ၊ ဆန်ပြုတ်(၃)ပန်းကန် ၊ ဆပ်ပြာ အမွှေးခဲ(၃)ခဲပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်စီ ထွန်းညှိ၍
လှူဒါန်းပူဇော်ရင်း အလိုရှိရာများကို အတိအကျ အသံထွတ်ပြီး ဆုတောင်းပါ …။
သောကြာသားသမီးများ အသက် ၁ ၊ ၉ ၊ ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ ၊ ၇၃ ၊ ၈၁ ၊ ၈၉ နှစ်များ၏
ဒုတိယ(၄)လအတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ လိုက်နာရန် နှင့် ပြုလုပ်ရန်ယတြာများ
ကံဇာတာကို အကောင်းအဆိုးခွဲပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် အလယ်အလတ်မှာပဲရှိပါတယ်။ မိမိကြိုးစားသလောက် စီးပွားတက်မယ့် အချိန်ကာ
လဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားကို ကိုယ်နိုင်သလောက် ပုံမှန်လေးပဲတိုးချဲ့သင့်ပါတယ် … ။
စွန့်စားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး …။ ယတြာတွေဖိချေပြီး လူကလည်းများများကြိုးစားမှ လုပ်ငန်းစီးပွားတိုးတက်ပြီး အကြံအစည်ရည်ရွယ်ချ
က်တွေ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ် … ။
စနေနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အထည်အလိပ် ၊ ထီး ၊ ဖိနပ် ၊ နာရီ ၊ဦးထုပ် ၊ လူမျိုးခြား ၊ နိုင်ငံခြား ၊ မီး ၊ လျှပ်စစ် ၊ အပူ ၊ ဓါတ်ပုံ ၊ ထီလုပ်ငန်း ၊
ထုံးလုပ်ငန်း ၊ နွားနို့ ၊ ဒိန်ချဉ် ၊ နို့ဆီ စသည့် တ ထ ဒ ဓ န နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ
ဗုဒ္ဓဟူးနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အလှအပ ၊ အနုပညာ ၊ အလှကုန် ၊ အလှပြင်ဆိုင် ၊ အလှအပနှင့်ပက်သက်သောအလုပ်များ ၊ ရွှေ ၊ ရတနာ
၊ ရေလုပ်ငန်း ၊ ရေသန့် ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၊ အအေးဆိုင် ၊ အရက် ၊ ဘီယာ ၊ ယိုစုံ ၊ လူမှုရေး ၊ လူအများနှင့်ပက်သက်သည့်အလုပ်များ ၊
ယာဉ် ၊ ရထား စသည့် ရ ယ လ ၀ နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ
စတင်ရန် ၊ တိုးချဲ့ရန် ၊ လုပ်ကိုင်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သောအချိန်ကာလဖြစ်ပေမယ့် … ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အလုပ်တွေကို ပုံမှန်လေးပဲဆ
က်ပြီး လုပ်နေသင့်ပါ တယ်။ လက်ရှိအလုပ်ကို စိတ်ပျက်လာတာမျိုးတွေ ကြုံလာရတတ်တယ်။ အလုပ်ကို အင်နဲ့အားနဲ့ မချဲ့သင့်ပါဘူး၊ လု
ပ်ငန်း ကြီးကြီးမားမားတွေလည်း အသစ်မစသင့် ပါဘူး …။
အထူးပြုလုပ်ရန် …. သောကြာနေ့ညဝတ်အိပ်တဲ့ အကျီင်္ဟောင်း တစ်ထည်ကို နောက်နေ့ မနက် စောစောမှာ မီးရှို့ ပစ်ရတဲ့ ယတြာ လုပ်ရမ
ယ်။(ငါ့မှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ အခိုက်အညံ့တွေအားလုံး ပါသွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါ)
အကြောင်းကိစ ရှိရှိ မရှိရှိ မဖြစ်မနေကိုပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကံမကောင်းဘူးထင်ရင် ၊ အကြောင်းကိစရှိရင် ထပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် …။
ဘုန်းကံမြင့်ရန် ၊ ကံကောင်းစီးပွားတက်ရန် ဓါတ်ဗူးအလွတ်ထဲမှာ ၊ ဓါတ်ပုံထည့် ၊ ထီးဖြူစိုက် ၊ အမြင့်မှာတင်ပေးထားလိုက်ပါ။ ကြက်သား
မရောက်ဖူး မသွားဖူးသောခရီးကို ရုတ်တရက်သွားရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ ကိုယ့်ဆီက
ထွက်သွားပြီး ကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့ သူဆီကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအရသာရှိတဲ့ အစား အသောက်ကိုပဲစားစား ခံတွင်းမတွေ့ဘဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။သူတစ်ပါးက စုန်းအတတ်၊ ပယောဂအတတ်ေ
တွနဲ့ ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံတတ်တယ်။
မမျှော်လင့်ဘဲ အမှုအခင်းလို စကားပြောငြင်းခုန်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ် …။ စိတ်ညစ်စရာ ပြဿနာတွေ ပေါ်တတ်တယ်။ မ
နာလိုတဲ့သူတွေက အတို့အထောင်လုပ်လို့ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်တတ် ။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲတာ တွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပေးစရာရှိတဲ့ငွေက ချက်ချင်းပေးရမယ်။ ရစရာရှိတဲ့ငွေကတော့ မရဘဲရှိ
လိမ့်မယ်။ အလုပ်မှာ စိတ်မဝင်စားသလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အလုပ်မှာ ပြဿနာပေါ်တတ်တယ် …။
ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေ အထစ်အငေါ့တွေများမယ်။ အနှောင့် အယှက်အတိုက်အခံတွေ ကြုံမယ်၊ ကိုယ်လုပ်သမျှကို အပြစ်တင် ကန့်
ကွက်မယ့်သူ တွေနဲ့ချည်းပဲ ဆုံဆည်းနေရတတ်ပါတယ်။
ဘာပဲလုပ်လုပ် မကောင်းထင်ခံနေရ တတ်ပါတယ်။ အလွန်ပင်ပန်းမယ့်အချိန်ကာလမျိုးပါပဲ …။ နေ့မအား၊ ညမအား ဆိုသလို အလုပ်တွေ
ရှုပ်နေမယ်။ ငွေမရတဲ့အလုပ်၊ သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စတွေက ပိုပြီးတော့ တောင် ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စတွေကို ခေါင်းခံတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးမတင်တဲ့အပြင် အပြစ်တင်ခံရတတ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းရကျိုး
မနာလိုရန်လိုသူလည်း ပေါပါ လိမ့်မယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ်ပါတယ်။ မဖြစ်စလောက်ကိစ္စ လေးကနေ ပြဿနာတွေ ရှ
င်းမပြီးအောင် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆွေမျိုးရင်းခြာများနဲ့ အဆင်မပြေုဖစ်တတ်ပါတယ်။
အထည်၊ထီး၊ဖိနပ်၊ပဲ၊ပြောင်း၊ပလပ်စတစ်၊မိတ္တူ၊မွေးမြူရေး၊ ပညာရပ် ဆိုင်ရာအလုပ်များ စတာစတာတွေမှာ အခက်အခဲတွေကြားထဲကပဲ
အလုပ်ဂုဏ် သတင်းတိုးတက်မယ်။ ဆရာသမား၊ ကြီးကဲသူတို့ရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ ဘယ်သူဟာ မိတ်ဆွေကောင်းဆို
တာကို မျက်ဝါးထင်ထင် သိခွင့်ရ မယ့် ကာလမျိုးပါပဲ။
မဖြစ်စလောက်နဲ့ စကားပြောငြင်းခုန်ရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးအတွက် သောကရောက်စရာ ကြုံရတတ်တယ်။ ပြည်တွင်းခ
ရီးတွေ အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်နေမယ်။ နိုင်ငံခြား၊ လူမျိုးခြား အဆက်အသွယ် ကောင်းတွေ ပေါ်လာမယ်။ အမွေကိစ္စ၊ မြေကိစ္စတွေမှာ
လည်း အဆင်ပြေအောင် မြင်နိုင်ပါတယ်
နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေ၊ ခရီးတွေကတော့ အောင်မြင်ကိန်းရှိနေပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေ၊ ပညာရေးကိစ္စ၊ သ
င်တန်းကိစ္စတွေမှာ ထွန်းပေါက်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ ပညာတစ်ခုရလိမ့်မယ်။ ပညာထူးဖြစ်တယ်။
အဖိုးတန် ပရိဘောဂ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ အထည်၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အသုံးအဆောင် တွေဝင်လာမယ်။ ရွှေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်ေ
နမယ်။ အိမ်အဆောက်အဦးကိစ္စ၊ နေရာ ထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာ မတင်မကျဖြစ်တာ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တာတွေ ကြုံရတတ်ပါ တယ်။
မိသားစုနဲ့ စိတ်သဘောကြီးစွာ ကွဲရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ကထွက်သွား မိသည်အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ် …။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေမှာလ
ည်း စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ယာဉ်၊စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ညစ်ရတတ်
ဒီအချိန်မှာ စပ်တူလုပ်ငန်းတွေလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျက်စီးတာ၊ပျောက်ဆုံးတာ၊ မှားတာယွင်းတာြ
ဖစ်တတ် ကြောင်းလည်း သတိပြုစေလိုပါတယ်။ ဝန်ထမ်းဆိုရင် ရာထူးတက်ပြီး နေရာကိစ္စ၊ ဝင်ငွေကိစ္စ အခက်အခဲတွေ့တတ်တဲ့အချိန်ဖြ
စ်ပါတယ်။ ဆုထူးဂုဏ်ထူးတွေ ဒီအချိန်မှာရတတ်ပါတယ်။
အလုပ်အပြောင်းအလဲ နေရာအပြောင်းအလဲကြုံတတ်ပါတယ် … ။ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ။
ငွေရေးကြေးရေး – ငွေကြေးတွေလည်း ဆုံးပါးတတ်တယ်။ အိမ်ကပစ္စည်းတွေ ချရောင်းရတဲ့အထိ ငွေပြတ် သွားတတ်တယ်။ ဒီအချိန်မျိုးဟာ ငွေကံမကောင်းတဲ့အချိန်၊ လာဘ်ပိတ် တဲ့ အချိန်မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ သတိထားထား ကြံဖန်ပြီး အကြွေးတင်သွားတတ်တယ်။ ရစရာရှိတဲ့ငွေ တွေမရဘဲဖြစ်တတ်တယ်။ ငွေ ပျောက်တာ၊ ဆုံးရှုံးနစ်နာတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးအတွက်လည်း ငွေကုန်ကြေးကျများရတတ်ပါတယ်။ ဘာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် နာမည်ကြီးပြီး ငွေပြတ်နေတတ်ပါတယ်။
ထီထိုးရန် – အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေကြေးကြပ်တည်းပေမဲ့ ထီဘက်ကနေပြီး ငွေ တွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးပုံတွေ၊ ဘာသာရေးပစ္စည်း စတာတွေ လက်ဆောင်အဖြစ် ဝင်လာခဲ့ရင် ထီပေါက်မယ့်နိမိတ်ပါပဲ။ ခြေရင်းဘက်မှာ အသုဘပေါ် ရင် ထီဆုကြီးပေါက်တတ်တယ် …။ (၅) ထိပ် (၇) ပိတ်၊ (၇) ထိပ် (ဝ) ပိတ် ၊ (၅) ထိပ် (၁) ပိတ်၊ (၇) ထိပ် (၁) ပိတ် ဂဏန်းတွေရှာပြီး ထိုးသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး – ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်တယ် …။ သွားကိုက်သွားနာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ခြေထောက်၊ခါး၊သွား၊သွေး၊အစာအိမ် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ အစားမှား၊ ဆေးမှားဖြစ်တာ၊ အစားအသောက်ပျက်တာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေပိပြီး ကျန်းမာရေးညံ့သွားတတ်တယ်။ စိတ်မော၊ လူမောဖြစ် ပြီး အားကုန်သလိုကြီး ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး – အတော်သတိထားရမယ့် ကာလမျိုးပါပဲ။ စိတ်သဘောမတိုက်ဆိုင် တင်းတင်းမာမာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကျက်ကျက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကာမဂုဏ်စိတ် ကုန်ခမ်းသွားတတ်တယ်။
အချစ်ရေး – ကံခေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ညှိမရနှိုင်းမရတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာကိစ္စ မစီစဉ်သင့်ပါဘူး။ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ စကားပြောငြင်းခုန်ဖြေရှင်းရတတ်တယ် …။ ဘေးလူဝင်ရှုပ်တတ်တယ် …။
ကံကောင်းစေတဲ့အရောင် … >>> အကျိုး ပေးတဲ့၊ ကံတတ် စေတဲ့၊ အောင်မြင် စေတဲ့ အရောင် ကတော့ အဝါရောင် ၊အနက်ရောင် ၊အစိမ်းရောင် တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းမြတ်မာလာ … >>> ဆောင်တာ ပန်တာ၊ ပန်းအိုး ထိုးတာ၊ ဘုရား လှူတာ အတွက် ပန်းမြတ်မာလာကတော့ … နှင်းဆီ၊ မေမြို့၊ ပိတောက်၊ ရွက်လှ ပန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့ကောင်းရက်သာ … >>>အရေးကြီးအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်၊ စကားပြောမယ်၊ လုပ်ငန်းသစ်စမယ်ဆိုရင် စနေ၊ ကြာသ ပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွေမှာ လုပ်သင့်၊စသင့်ပါတယ်။
အကျိုးပေးနေ့သား … >>>လုပ်ငန်း စပ်တူ လုပ်မယ် ဆိုရင်လည်း စနေ ၊ကြာသ ပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး တွေနဲ့ တွဲပြီး လုပ်ရင် အောင်မြင်မယ်၊ အကျိုး ပေးမယ်၊ သဘော ကတော့ စနေ၊ ကြာသ ပတေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး နံတွေဟာ အကျိုး ပေးတယ် လို့ပဲ နားလည် လိုက်ပါ။
အကြံအစည်များအောင်မြင်ရန် ကံကောင်းရန် ယတြာများ – ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ နွားနို့အနည်းငယ်ထည့် နှင်းဆီ (၃) ပွင့်ထည့် ခေါင်းလောင်းချိုးပါ …။(ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မဆို လုပ်ပါ ၊ မကြာခဏ လုပ်ပေးပါ)
မနက်စောစောမှာ အိမ်ဘုရားမှာ ပန်းအဝါ(၅)ပွင့် ၊ မုန့်ကြွပ် (၇)ချပ် ၊ နွားနို့တစ်ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင် (၇) တိုင်စီ လှူဒါန်းပြီး လိုရာဆုကို တောင်းပါလေ။
#တတိယ(၄)လအတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ လိုက်နာရန် နှင့် ပြုလုပ်ရန်ယတြာများ
ကံကြမ္မာကို အကောင်းအဆိုးခွဲပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် အလွန်ကောင်းတဲ့ အခါသမယလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေ၊ တိုးတက် အောင်မြင်မှုတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေ အဘက်ဘက်က ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အချိန် ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္လာနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ငွေ ၊ ခြံ ၊ ကား ၊ ကျောက် ၊ ကုန်သည် ၊ ကွန်ပြူတာ ၊ ကင်မရာ ၊ ကွမ်းသီး ကွမ်းယာပစ္စည်း ၊ ကုန်ခြောက် ၊ ကုန်စုံ ၊ ကြက်ဥ ၊ ကြက်သား ၊ ကြက်မွေးမြူရေး ၊ ငါးပိ ၊ ငါးခြောက် ၊ ငါးမွေးမြူရေး စသည့် က ခ ဂ ဃ င နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ
စနေနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အထည်အလိပ် ၊ ထီး ၊ ဖိနပ် ၊ နာရီ ၊ဦးထုပ် ၊ လူမျိုးခြား ၊ နိုင်ငံခြား ၊ မီး ၊ လျှပ်စစ် ၊ အပူ ၊ ဓါတ်ပုံ ၊ ထီလုပ်ငန်း ၊ ထုံးလုပ်ငန်း ၊ နွားနို့ ၊ ဒိန်ချဉ် ၊ နို့ဆီ စသည့် တ ထ ဒ ဓ န နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ
သောကြာနံလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဟော်တယ်လုပ်ငန်း ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၊ ကုန်သည်ကြီးအလုပ် ၊ စကားပြောရသောအလုပ် ၊ လှုပ်ရှားရသောအလုပ် ၊ ပွဲစားအလုပ် ၊ အသံကိုအသုံးချရသောအလုပ် ၊ ခရီးသွားရသောအလုပ် ၊ ရေကြောင်းခရီး ၊ သင်္ကန်း ၊ သစ် ၊ သံ ၊သွပ် ၊ သစ်သီး ၊ သီးနှံ ၊ သားငါး ၊ အသုပ် စသည့် သ ဟ နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်လုပ်ငန်းများ… စတင်ရန် ၊ တိုးချဲ့ရန် ၊ လုပ်ကိုင်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သောအချိန်ကာလဖြစ်သည်။
အာလူး၊ ဝက်သား၊ အုန်းရည်၊ အရက် စတာတွေဟာ ကိုယ့်ကို ကံအနိမ့်အညံ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက် သတိမူပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်…။ မိမိနေတဲ့နေရာရဲ့ အိမ်ရှေ့ဘက် ၊ ခေါင်းရင်းဘက်တွေမှာ လမ်းပြင်တာတွေ ၊ လမ်းခင်းတာတွေလုပ်ရင် ပ်ယာပြောင်းအိပ်သင့်ပါတယ်။
ကြံတိုင်းအောင်လို့ ဆောင်တိုင်းမြောက်ဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးပါပဲ။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲလုပ်ပေတော့လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် …။ ငွေအား လူအား ရှိသလောက် အရှိန်အဟုန်နဲ့ အင်အားသုံးပြီး စီးပွားတိုးချဲ့သင့်တဲ့အချိန်ပါပဲ။
ဆင်းရဲမွဲတေနေသူတွေတောင် ဒီလိုကိန်းမျိုးမှာ အိုးပိုင် အိမ်ပိုင် ၊ ကားပိုင်တွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် …။ တနင်္လာသား သမီး၊ စနေသားသမီးတွေကလည်း ကောင်းစွာကူညီထောက်ပံ့လာနိုင်ပါတယ်။
အလှူအတန်းကြီးတွေ လုပ်ရတတ်တယ်။ ကိုယ့်မှာ အဆင်ပြေအောင်မြင် တဲ့အတွက် ဆွေမျိုးသားချင်းကိုလည်း ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ခြံ ၊ တိုက်ခန်း ၊ ကား ကောင်းသောဝင်ခြင်းနဲ့ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
ခရီးကိစ္စတွေလည်း အောင်မြင်မယ်။ ဘုရားဖူးခရီး သွားရမယ်။ ပြည်ပ ခရီးအစီအစဉ်ရှိရင်လည်း အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကိစ္စများ အကျိုး ပေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာဏ ခရီးတွေထွက်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်အဆောက်အဦးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်နိုင် လိမ့်မယ်။ နေရာအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေလည်း အောင်မြင်လိမ့်မယ်။
အလုပ်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ပေါ်တတ်တယ်။ အလုပ်ပြောင်းချင် ထွက်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်နေမယ် …။ မပြောင်း မထွက်သင့်သေးပါဘူး …။ ရာထူတိုးတာ လစာတိုးတာတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ် …။ ရာထူးကိစ္စရော၊ နေရာကိစ္စရော၊ ဝင်ငွေကိစ္စပါ စိတ်ချမ်းသာရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုနဲ့စိတ်သဘောကြီးစွာ ကွဲတတ်တဲ့အချိန်၊ အိမ်က ထွက်သွား မိတတ်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာတော့ အထစ်အငေါ့ အနှောက် အယှက်တွေ များလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေရင်း ဆရာရင်းတွေနဲ့ လည်း အဆင်မပြေ လမ်းခွဲရတတ်ပါတယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ရောက်လာပြီး ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ .
အရင့်အရင်က ကိုယ်နဲ့မသင့်မြတ်သူတွေနဲ့ပြန်ပြီး သင့်မြတ်တတ်တယ်။ အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ၊ အထည်အလိပ်၊ထီး၊ဖိနပ်၊လျှပ်စစ် ပစ္စည်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကား စတာတွေ ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အမွေကိစ္စ၊ မြေကိစ္စတွေမှာတော့ အဆင်မပြေ ထစ်ငေါ့နေတတ်တယ် …။ ရွှေထွက်တတ်တယ်၊ ပျောက်တတ်တယ်၊ စက်ပစ္စည်းအတွက် ပြောဆို ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ စပ်တူကိစ္စ၊ စာရွက်စာချုပ်ကိစ္စတွေအတွက်လည်း စိတ်အနှောက် အယှက် ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေ အိမ်ကထွက်တတ်တယ်။
ကျန်းမာရေးအနေ – ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မရှိလှပါဘူး။ နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါ။ အာရုံကြောအားနည်း၊ လေထိုးလေအောင့်၊ ဆီး၊မျက်စိ၊အစာအိမ်ရောဂါတွေ နည်းနည်းလေး ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ခေါင်မူး ခေါင်းကိုက်တက်တယ်။ ဗိုက်အောင့် တတ်တယ်။ ဝမ်းတွေဘာတွေလည်း ပျက်တတ်တယ်။ မျက်စိအားနေတတ်တယ်။ မျက်မှန်ပါဝါတိုးသွားတတ်ပါတယ်။
ငွေရေးကြေးရေး – ငွေတအားရွှင်မယ်။ လာဘ်လာဘလည်း အလွန်ရွှင်မယ်။ ထီပေါက်သလို အပုံလိုက်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဝင်ရိုးဝင်စဉ် ငွေတွေအပြင် အဘက်ဘက်က ဝင်လာလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် နှစ်ခါဝင်မယ် …။ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ငွေတွေ ဝင်လာတတ်တယ်။ အမွေတွေ ဘာတွေ ရစရာရှိရင်လည်းရမယ် ..။ ငွေကြေးတွေ စုမိဆောင်းမိဖြစ်မယ် … ။ တစ်ခုပဲ သတိထားရမယ်။ တစ်ချီတည်းအပွကြံတာမျိုး၊ အကောက်ကြံတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ …။ မမျှော်လင့်ဘဲ အလှူအတန်းလုပ်ရတတ်တယ် …။
ထီထိုးရန် – ထီလည်း စိုက်လိုက်မတ်တပ် ထိုးသင့်ပါတယ်။ ထီတွေဘာတွေလည်း ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ကြက်ခွပ် ၊ ကားတိုက် ၊ နတ်ကနား နိမိတ်ကြုံရင် ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဧည့်သည်ရောက်လာရင် ထီထိုးပါ …။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ရောက်လာပြီး ညအိပ်ညနေ တည်းခိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မှာ အရင်ကတည်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ရှိနေခဲ့ရင် ထီဆုကြီးပေါက်တတ်ပါတယ်။ (၇)အစ(၂)အဆုံး၊ (၂)အစ (၆)အဆုံး၊ (၄)အစ (၇)အဆုံး ဂဏန်းတွေကို ရွေးပြီးထိုးသင့်ပါ တယ်။ကိုယ့်အနီးဝန်းကျင်မှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ အလှူပွဲတို့၊ မင်္ဂလာပွဲတို့ ပွဲလမ်းသဘင်ကြုံတဲ့နေ့မျိုးဆိုရင် ထီထိုးသင့်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး – အောက်လက်ငယ်သားကို အကြောင်းပြုပြီး အဆင်မပြေ စိတ်သဘောကွဲလွဲရတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီ ခွဲနေရ တတ်ပါတယ်။ သတိထား ရမယ်။ စိတ်ပူစရာတွေ ၊ စကားပြောငြင်းခုန်ရတာတွေ ၊ ဘေးလူဝင်ရှုပ်တာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ် …။ သားသမီးအတွက် စိတ်သောကရောက်ရတတ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးရှိရင်တော့ သတိထားပါ။ အိမ်ကထွက်သွား တတ်ပါတယ်…။
အချစ်ရေးမှာ တွေးလိုက်တိုင်း ပျော်စရာတွေချည်းပဲ ကြုံနေပါလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်း စကားပြော စီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။ မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်နေမယ် …။ ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမယ် …။
အထူးအဆောင် – အဖိုးမတန်ဘူးဆိုပြီး ဘူးထဲ ခွက်ထဲမှာ ပစ်ထားတဲ့ ကျောက်ကလေးတစ်လုံးရှိနေတတ်တယ်။ ဘာကျောက် ပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်ကတော့ ခပ်ဖျော့ဖျော့ပါပဲ …။ ထိပ်မှာ အနာကလေးပါလိမ့်မယ် …။ အဲဒီကျောက်ကလေးကိုရှာပြီး ငွေလက်စွပ်ကွင်းပြီး လက်မှာဝတ်ထားလိုက်ပါ …။ အဲဒါ အလွန်ကောင်းတဲ့ အဆောင်ဖြစ်ပါတယ် …။
ကံကောင်းစေတဲ့အရောင် – အဖြူရောင်၊ အနက်ရောင် ၊ အပြာရောင်တွေ ကံကောင်းအကျိုးပေးတယ်။ ပန်းမြတ်မာလာ – ကံတက် စေမယ့်၊ကံကောင်းစေမယ့်၊ဆောင်ရမယ့်၊ ပန်းအိုးထိုးရမယ့်၊ ဘုရား လှူရမယ့်၊ ပန်းမြတ်မာလာတွေကတော့ .. ကံ့ကော်၊ နှင်းဆီ၊ သပြေ ပန်းတွေပဲ ဖြစ်တယ်။
နေ့ကောင်းရက်သာ – အရေးကြီးကိစ္စတွေလုပ်ရင် … စနေ၊ သောကြာ၊ တနင်္လာ နေ့တွေမှာ လုပ်ပါ။ အကျိုးပေးနေ့သား – လုပ်ငန်း စပ်တူ လုပ်ကိုင် ရင်လည်း စနေ၊ တနင်္လာ၊ သောကြာ သားသမီး တွေနဲ့ပဲ စပ်တူ လုပ်ကိုင် သင့်တယ်၊ အကျိုး ပေးမယ်။
အကြံအစည်များအောင်မြင်ရန် ၊ ကံကောင်းရန် ယတြာများ – တနင်္လာနေ့မနက်မှာ ငါး (သို့) ငါးခူ (သို့) ဂဏန်း ၂ ကောင် ဘေးမဲ့လွှတ်ပြီး ဆုတောင်းပါ။ ဂဏန်းလက်မမှာ ကြိုးချည်ထားရင် ဖြေပြီး လွှတ်ပါ။ မနက်စောစောမှာ နှင်းဆီ (၇) ပွင့်၊ ပန်းအဖြူ(၂)ပွင့် ၊ နွားနို့ (၂) ခွက်၊ ကိတ်မုန့်(၂)ချပ်ပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်စီထွန်း၍ အိမ်ဘုရားမှာလှူဒါန်းရင်း အလိုရှိရာများကို အတိအကျ အသံထွက်ပြီးဆုတောင်းပါ …။
၂၀ ရကျနတှေ့ငျ အမွငျ့ဆုံး အပူခြိနျရောကျမညျ့ တိုငျးဒသေကွီး စာရငျး
ဘယျလိုအခွအေနရေောကျရောကျ ဖွဈတညျမှုကို ခဈြတတျပါစေ